Navigraph dia mahazo SimBrief
Fonosana nohavaozina FSX Fairchild C-82
P3D v4 / v5 TUI Belzika Boeing 737-700 FSPXAI
FS2004 Lockheed Lodestar Upgrade
Fampidinana: 7,072 alaina 966,946 fotoana.
Please Hanome naoty Vote 1 Vote 2 Vote 3 Vote 4 Vote 5
Navigraph, loharanom-pahalalana azo antoka an'ny vondrom-piarahamonina simulate ho an'ny tabilao nohavaozina sy ny angon-drakitra momba ny fitetezana, androany dia nanambara fa nahazo SimBrief, rindrambaiko fandaminana sidina malaza indrindra an'ny vondrom-piarahamonin'ny sidina sidina.
Ny fahazoana dia fandrosoana voajanahary amin'ny fiaraha-miasa efa akaiky eo amin'ny Navigraph sy ny SimBrief. Izy io dia miorina amin'ny fampidirana ireo sehatra roa misy hatramin'ny 2013 ary manome ny fahaizana manao drafitra sidina amin'ny alàlan'ny angon-drakitra fitetezana.
Hanohy ho maimaim-poana ny fiasan'ny SimBrief momba ny fandaminana sidina. Ireo mpampiasa izay te hampiasa ny angon-drakitra fitetezana farany indrindra dia afaka misoratra anarana amin'ny Navigraph ary mamaha ny tsingerin'ny AIRAC ao amin'ny SimBrief, toy ny teo aloha.
"Mpanorina SimBrief Derek dia nanao asa miavaka namorona serivisy fanomanana sidina izay tian'ny vondrom-piarahamonina simulasi sidina." hoy i Magnus Axholt, CEO ary mpiara-manorina ny Navigraph. "Mikasa ny hampiditra SimBrief sy Navigraph lavitra kokoa izahay ary hamela fampiasa fanampiny ho an'ny SimBrief amin'ny alàlan'ny angona sy loharanom-pahalalana azon'ny Navigraph."
"Derek dia hanana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana ny sasany amin'ireo endri-javatra amin'ny vokatra Navigraph Charts ho avy. Miaraka amin'ny fifangaroana mahery vaika amin'ny tontolon'ny fiaramanidina tena izy sy ny traikefany momba ny fampandrosoana lozisialy, Derek dia mpikambana tongasoa ao amin'ny ekipa Navigraph Development izay mahay sy marobe.
"Hataonay izay mora ampiasain'ny mpandrindra ao amin'ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny fandaminana ny SimBrief API miaraka amin'ireo API Navigraph ao amin'ny Navigraph Developer Portal ho avy." Mamintina i Magnus.
"Navigraph dia mpanohana an'i SimBrief matanjaka hatramin'ny voalohany." Nanampy i Derek. “Nahafinaritra ahy foana ny niara-niasa tamin'izy ireo hanatsara ny fampidirana ireo serivisy roa. Tena toy ny fandrosoana voajanahary izany ary tena faly aho fa anisan'ny ekipa mandroso. ”
Hoy ihany izy: "Matoky aho fa ny loharanom-pahalalana Navigraph sy ny ekipa fampandrosoana efa za-draharaha dia tsy vitan'ny hoe hiantoka ny fijanonan'ny SimBrief ho an'ny fiarahamonina mandritra ny taona maro ho avy, fa hanao fanatsarana sy fanatsarana vaovao tsy dia ilaina koa azo atao. ”
"Sady nanetry tena aho no tena feno fankasitrahana noho ny fanohanan'ny fiarahamonina ahy hatramin'ny nanombohako ny SimBrief efa ho valo taona lasa izay, ary manantena ity toko manaraka ity amin'ny fivoaran'ny SimBrief aho." hoy i Derek famaranana.
SimBrief dia hitohy hiasa amin'ny anarana SimBrief, fa miaraka amin'ny tsipika tag "by Navigraph".
Sokajy: Vaovao hafa
Navoaka: 03 Aprily 2021